Manomeza ho an'ny EMM-Campagne Moet Verbeteren
Ny varotra mailaka dia iray amin'ireo tetik'ady ara-barotra maimaim-poana ara-barotra. Ao amin'ny rapport vao haingana dia nandefa mailaka 8 ny kaonty mailaka ary nanoratra tamin'ny endri-tsoratra rehetra ary namerina ny fotoana nahaterahana 6 hafa noho ny hafa marketing strategiques na marketing ara-tsosialy sosialy. Ny teknolojia fampandrenesana mailaka dia nampiasaina tamin'ny 82% avy amin'ny B2C sy B2B orinasa mba hifaneraserana amin'ny mpanjifa sy ny tsena vokatra ary ny asa - satin stoff bedruckt.
Ireo toro-hevitra mahazatra mikasika ny fampiharana ny EMM-Campagne, toy ny nasehon'i Ross Barber, ny Customer Success Manager van Semalt .
Ny fampiharana ny zavatra ilaina sy ny fisainana izay manana ny tanjon'ity orinasa ity, dia hanampy anao hikatsaka ny e-mail rehetra izay hanampy anao hahita ny tanjona. Raha hitanao amin'ny olona rehetra ny anao amin'ny baoritra iray, dia ny resam-pahefana sy ny mpanjifa dia tsy mety. Ny sasany amin'ireo dia afaka mandefa mailaka ho an'ny spam ary marihina fa tsy misy vidiny ho azy ireo.
2. Mailaka amin'ny mailaka
Tao anatin'ny fotoana fohy dia nampiasaina ny fandefasana hafatra amin'ny mailaka miaraka amin'ny adiresy imailaka. Ny orinasan-tserasera dia mbola tsy voatanisa ny e-mail, fa tsy ampy. Rehefa tapitra ny adiresy mailaka ho anao, dia azonao atao ny mandefa e-mail raha te-hiditra sy hiditra amin'ny mpisera. Na izany aza, olona an-tapitrisany mampiasa ny fitaovana maimaim-poana mba hampiasana ny mailaka, halefa ny karatra, mba hahafahan'ny tarika mora mora foana rehefa mandeha izy ireo..
Ireto misy fanontana an-tsoratra an-tserasera sy ny fanamafisam-peo, toy ny "Hello Sir" ao amin'ny "Mahatsiaro ahy fa tsy mety" ianao ary mety ho hitanao fa ny e-mailanao dia voatondro ho toy ny adiresy imailaka amin'ny adiresy, amin'ny zava-dehibe ny hafatra.
Fanampim-panazavana ho an'ny fampahalalam-baovao mahazatra
4. Adiresy mailaka
Miankina amin'ny fampiasana ny anarana sy ny endri-tsoratra madinika "Tia anao, tsara indrindra" sy ny toy izany. Manorata ny maha-olona amin'ny anaran'ny mpisera ao amin'ity sasantsasany amin'ny mailaka ity. Rehefa mandefa mailaka amin'ny fampitaovana fampitaovana an-telefaona, dia mety mbola azo atao ny mamantatra ny anaran'ny mpisera rehetra ao amin'ny aterineto. Ity lafin-javatra ity dia tsy voavaly ny adiresy e-mail.
5. Anisan'izany ny antso an-tanana
Ny antso an-tariby dia maneho ny heviny iray izay milaza ny fanapahan-kevitra noraisinao tamin'ny alàlan'ny fanandevozana ny e-mail. Ity dia tokony handefa mailaka iray amin'ny CTA amin'ny alàlan'ny mailaka, satria maro kokoa ny CTA no tsy afaka manakana ny mpampiasa. Raha toa ianao ka mampiasa ny mombamomba ny tranonkala iray, dia tokony hitodika any aminao fa ny adiresy an-tsoratra momba ity pejy ity dia miompana amin'ny fisaintsainana sy ny fanantenana izay nampidirinao tao amin'ny e-mail.
Ny tena mahafa-po ireo mailaka mpitsikilo dia manamboatra ny kanto mba hamoronana ny mailaka sy ny fahafinaretana. Ny fampiasana karazana fonosana malalaka izay azo jerena ao an-desktop ho an'ny finday, dia iray amin'ny fomba mahomby hanatsarana ny tanjona.
Manomboka amin'ny fampiasana an'ireny torohevitra ireny mba hahombiazan'ny fifanakalozan-kevitra avy amin'ny mailaka mailaka. Mitandrema fa ny vokatra azo avy aminao dia ny manavaka anao amin'ny fomba tsara indrindra.